Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): May 2012
၀င်းယဆရာတော်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ အစီးအဝေးမှတ်တမ်းနဲ့ ရေးလာတဲ့ပေးစာ
မေလ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၂
၀င်းယဆရာတော် ဦးသြဘာသနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ PNO လူကြီးမှ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အစီးအဝေးမှ အစီးအဝေးရဲ့အစီအစဉ်တွေ၊ အစီးအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်းတွေ၊ အစီးအဝေးဖိတ်စာတွေ၊ အစီးအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အမည်စာရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းအပါအ၀င် ဒီအကြောင်းအရင်းကို အသေးစိတ် အစအဆုံးသိတဲ့ ဒေသခံတစ်ယောက်ရဲ့ ရေးလာတဲ့ပေးစာနဲ့အတူ ပအိုဝ်းပြည်သူလူထုများသိရှိအောင် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Taunggyitimes9comments
၀င်းယရွာသားများ၏ပြောဆိုချက်အရ ၂၃-၅-၂၀၁၂ နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော
အမိန့်စာအား ပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးပေးမည်ဟု အချို့ဆရာတော်ကြီးများက
မိန့်ဆိုလိုက်ကြောင်း သတင်းထပ်မံရရှိပါသည်။ သို့သော် ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်၌
ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ကိုမူ အတိအကျ မသိရသေးကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
တောင်ကြီးမြို့နယ် ကျောက်တလုံးမြို့နယ်ခွဲ နောင်ပစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ပုံဆွေပင်ကျေးရွာနှင့် ၀င်းယစံပြရွာကြီးအကြား (နှစ်ရွာအကြား) တွင် သုံးရွာ (တခေါ့မူးရွာ၊ ပုံဆွေပင်ရွာ၊ ၀င်းယရွာ) သဘောတူ သတ်မှတ်ထားသော သုံးရွာပိုင် ဘုရားဝတ္တကမြေပေါ်တွင် သားသတ်ရုံဖွင့်၍ သားသတ်လုပ်ငန်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည်မှာ နှစ်အတန်ကြာပြီဖြစ်သည်။
Posted by Taunggyitimes7comments
တောင်ကြီးမြို့ကို အလည်တစ်ခေါက် နှစ်ဆန်းက ရောက်ခဲ့သည်။ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရားငါးဆူနှင့် အင်းတိမ်ဘုရားကြီးကို ဖူးခဲ့သည်။ ထမ်းဆန်းဂူအကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖတ်ဖူးပြီးကတည်းက သွားချင်စိတ် ရှိနေခဲ့သည်။
Shwe Mann (Burma’s lower house speaker, ear marked to become
the next president of Burma) together with his retinue of criminals
signing the nuclear cooperation with North Korea in 2008
မိမိ၏စိုက်ပျိုးမြေအသိမ်းခံခဲ့ရသည့်လယ်သမားတစ်ဦးမှ သမ္မတကြီးထံသို့ ရေးပို့သည့်အသနားခံစာ
နေပြည်တော်။ ရက်စွဲ။ ၅ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂
အကြောင်းအရာ။ ။ စိုက်ပျိုးမြေများ သိမ်းဆည်းခံရခြင်းအပေါ် နစ်နာကြေး အသနားခံ တောင်းခံသည့်ကိစ္စ။
မိမိစိုက်ပျိုးမြေများ အသိမ်းခံခဲ့ရသည့် ရွာ (၁၀) ရွာတို့မှ ဒေသခံများ၏ရင်ဖွင့်သံ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ နမ့်ဆီးအုပ်စုအတွင်းမှ ပင်ငိုရွာ၊ မဲဟဲရွာ၊ နောင်ကာကယ်ရွာ၊ ညောင်ဖျူးရွာ၊ ထီအုန်းစိမ်းရွာ၊ အောင်းမူးရွာ၊ ဖောင်တော်ဆိပ်ရွာ၊ ကွန်ချောင်းရွာ၊ ပုံးစင်ရွာ၊ လှိုင်းငေါက်ရွာတို့မှ အမှတ် (၅) သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်) စီမံကိန်းနှင့်
By Kanbawza Win | 20 May 2012
The US has suspended economic sanctions on Burma as President Obama marks the beginning ofanew chapter in the relationship between the United States and Burma, and had nominated Derek Mitchell as the first American ambassador in 22 years. The aim is to support reformers in government and civil society, facilitating broad-based economic development, and bringing Burma out of isolation and into the international community. It also claims that sanctions will now specifically target "bad actors" But the question is who are the bad actors?
By ခင်ဦးသာ | မေလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၂ | ဧရာဝတီ
အစိုးရ စစ်တပ်များအနေဖြင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) အပေါ် ထိုးစစ်ဆင်မှုများ တလအတွင်း ရပ်ဆိုင်းပေးရန် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ(UNFC)က ကြေညာချက်ထုတ် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
PNO ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခမ်းထီ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခမ်းထီသည် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၇)ရက်နေ့တွင်
တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောက်တလုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီလုံရွာနေ ပအိုဝ်းပိန္တောဆေးဆရာ ဂျန်ဖာစာရိန္တနှင့် ဂျန်မွိုးလဲုင်းတို့မှ ဖွားမြင်သည့် သားသ္မီး(၁၁)ဦးအနက် ဒုတိယ အငယ်ဆုံး သား ဖြစ်သည်။ အောင်ခမ်းထီ၏ ငယ်မည်မှာ ခွန်ကီး ဖြစ်သည်။ အောင်ခမ်းထီသည် (?)ခုနှစ်တွင် နန်းဖျူးနှင့် အိမ်ထောင်ကျ၍ သားသ္မီး(၆)ဦးထွန်းကားပြီး ၎င်းတို့မှာ နန်းလုံခမ်၊ ခွန်စိန်မင်း၊ ခွန်အောင်းကျေား၊ အောင်းခမ်း၊ နန်းခံရွဉ်၊ ခွန်အောင်းခမ်းကွို တို့ဖြစ်သည်။
ပင်လုံအခြေစိုက်အစိုးရတပ်ရင်းအနီး မှိုင်းဗုံးကွဲ ပအိုဝ်းကျေးလက်တဦးသေ
Thursday, 03 May 2012 | သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ပင်လုံမြို့အခြေစိုက် ခမရ ၅၁၃ တပ်ရင်း အနောက်ဘက်တွင် မြေမြှုပ်မှိုင်းတလုံး ပေါက်ကွဲသဖြင့် ခြံလုပ်သား ဇနီးမောက်နှံ မှိုင်းဗုံးဒဏ်ထိပြီး ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားသည်ဟု ပင်လုံမြို့ခံများက ပြောပါသည်။
၈၈ ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ ဟိုပုံးမှာ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဟောပြော
2012-05-02 | RFA
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ခရီးစဉ်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ ဟိုပုံးမြို့နယ်က မျိုးဆက်သစ် ပအို့ဝ်လူငယ် ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေး ဟောပြောခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။